Toca Store, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Rehefa mitombo ny kely indrindra amin'ny trano dia mivoatra ny tsirony amin'ny fampiharana ary mila fampiharana na lalao sarotra kokoa izy ireo. Ny ankizilahy ao amin'ny Toca Boca dia manolotra anay fangatahana betsaka ho an'ny kely indrindra amin'ny trano ao amin'ny App Store mba handrakofana saika izay ilain'ny zanakay. Androany dia miresaka momba ny fampiharana Toca Store isika, fampiharana slab iray izay kely indrindra amin'ny trano no hamadika ny iPhone, iPad na iPod touchantsika ho fivarotana. Toca Store dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,99 euro, fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana.
Toca Store dia rindrambaiko ahafahan'ny ankizy maromaro milalao amin'ny fotoana iray na iray irery, izay samy hanana ny toerany: ny an'ny mpivarotra sy ny mpividy. Misaotra an'i Toca Store, ireo kely hanomboka handray fanapahan-kevitra izy ireo, hanisa vola, hianatra izay vidiny sy ny sandany ... Misaotra an'ity lalao ity, ny zanatsika dia hanomboka hahafantatra ireo loharanom-pitantanana, fahaizana matematika, fifampiraharahana, fiaraha-miasa, mifandimby.
Toca Store Features
Ao amin'ny Toca Store dia manana vokatra mihoatra ny 30 hividy sy hivarotra izahay.
Ny vidin'ny vokatra tsirairay dia azo ovaina mba hifanaraka amin'ny zava-misy ka manomboka mianatra ny lanjan'ny zavatra ny ankizy.
Asao ny naman'ny zanakay hanomboka hahafantatra ny tontolon'ny fiantsenana ihany koa.
Tsy misy karazana dokam-barotra na fividianana fampiharana.
Natao ho an'ny ankizy hatramin'ny 5 taona.
Raha tsy misy fitsipika na torolàlana dia milalao araka ny itiavany azy ny ankizy nefa tsy misy fanerena amin'ny lalao.
Toca Store dia mifanaraka amin'ny iOS 6.0 na avy eo. Izy io dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch ary misy Naoty 4 salan'isa amin'ny 5 azo atao.
Touch Store€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Toca Store, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra